Tetikasan’ny filoham-pirenena : tratry ny barofo ny mpivarotra | NewsMada
Tetikasan’ny filoham-pirenena : tratry ny barofo ny mpivarotra
Tsy afaka ny hangina. “Tsy ara-dalàna ny fanalana anay sy ny famefena ary koa ny fandravana ny fivarotanay eto… Efa nampiakatra ny raharaha izahay ka tokony hiato izany aloha…”, hoy ny mpisolovava Rabemarija Olivier Edouard, omaly. Nandrava sy namefy etsy amin’ny fiantsonan’ny taxibe, Anosy ny M2pate, hanao ilay tetikasan’ny filoha. Voailika ireo mpivarotra. “Nahazo alalana amin’ny CUA izahay ary nahaloa ny vola rehetra takina nefa izao tapahina izao ny fivelomanay”, hoy izy ireo. Nampiasa volabe sy mpiasa ary fitaovana amin’ny maha fiveloamana izany. “Tsy misy fifanajana sy fifampiresahana fa didy jadona. Tsy manda ny tetikasa izahay, saingy tokony hifanaja”, hoy ihany izy ireo.
Mitohy ny amboletra sy ny tsy tan-dalàna…
Nambaran’ireto mpivarotra ireto fa tsy tokony ho tafiditra amin’io tetikasa io ny tsenan’izy ireo. Vonona ny hanatsarana izany, hifanaraka amin’ny fepetra takina, koa izy ireo ka mba tokony havela hijanona amin’io toerana io. Tsy nihemotra anefa ny M2pate . “Tokony hiato avokoa izao ataon-dry zareo izao raha tena tan-dalàna isika. Tsy nofoanany ny fanomezan-dalana nomen’ny CUA. Efa any amin’ ny fitsarana koa ny raharaha nefa mitohy ny amboletra sy tsy fanajana lalàna”, hoy izy ireo.
Une réponse à "Tetikasan’ny filoham-pirenena : tratry ny barofo ny mpivarotra"
Bali 31/01/2018 à 07:32
mi ignorer tanteraka ny CUA le fitondrana, tsy manaja antanatoha-pitondrana fa dia manao didiko fehy lehibe, raha ny tokony ho izy dia tokony hisy foana ny fankatoavan’ny CUA na inona na inona asa atao eto antananarivo eny fa na ny fitondrana faobe aza no hanao azy